Sunday December 17, 2017 - 21:39:13 in Maqaallo
Hargeysa- Saraynta sharcigu (supremacy of the law) waa laan ka mid ah waxa loo yaqaan isku xukunka sharciga (rule of law) oo ka soo horjeedda xukunka qofka kursiga ku fadhiya (rule of man). Isk xukunka sharcigu waa mabda muhiim u ah helidda dawlad w
Hargeysa- Saraynta sharcigu (supremacy of the law) waa laan ka mid ah waxa loo yaqaan isku xukunka sharciga (rule of law) oo ka soo horjeedda xukunka qofka kursiga ku fadhiya (rule of man). Isk xukunka sharcigu waa mabda muhiim u ah helidda dawlad wanaag, dhaqaale kora, iyo ilaalinta xuquuqda dadka. Hadaba, waa maxaay isku xukunka sharcigu? Anniga oo aan u galayn qeexidaha faraha badan ee ay leedahay iyo faah-faahin dheer toona, waxaan si kooban u soo qaadanayaa tilmaanta uu ka bixiyay filasoofarkii waynaa ee loo aaneeyo inuu bud u dhig u ahaa mabda'an. Waa John Locke.
Isku xukunka sharcigu waa in la helo laba arimood:
1. In sharciga loo siman yahay (equality before the law): ka kursiga ku fadhiya, ka lacagta haysta iyo dadka shacabka ah dhamaantood waa inay u siman yihiin sharciga oo uu si isku mid ah u qabanayo. Ka bilow xeerarka wado marista ilaa halka u saraysa, waa in sharciga loo siman yahay.
2. Saraynta sharciga (supremacy of the law): madaxda amaradooda iyo awoododa waa inuu ka sareeyo sharcigu. Waxaay jecel yihiin sharcigu maaha. Saraynta sharcigu waa in qanuunka yaal ee loo sameeyey si sharciga waafaqsan in uu yahay ka cid walba ka sareeya. Waxa ugu horeeya uguna mudan dastuurka oo ah sharciga u sareeya dalka ee aanay khilaafi karin madaxda amaradooda, falalka ay sameeyaan iyo shuruucda la sameeyo.
Isku xukunka sharcigu waa dabarka kuwa awoodda haya ka ilaaliya inay dadka ku kibraan iyo inay boobaan hantidooda, una isticmaalaan awodda si xun. Saraynta sharcigu maaha in dadka shacabka ah loo tamar iyo xoog sheegto waayo iyagu awalba awood ay sharci ku riixan may lahayn. Inta xoogga leh oo ay ka mid yihiin madaxda iyo ganacsatada ayaa sharciga si xun u adeegsata, isaga jiidha, ama lacag ku iibsata.
Guleid waa qareen ka hawl gala Somaliland.